Madaafiic Leysku Weydaarsaday Saaka Deegaanka Tuke-raq Oo Sababay Khasaare Dhimasho Iyo Dhaawac – somalilandtoday.com
Madaafiic Leysku Weydaarsaday Saaka Deegaanka Tuke-raq Oo Sababay Khasaare Dhimasho Iyo Dhaawac
(SLT-Tuke-raq)-Wararka aanu ka helayno deegaanka Tuke-raq ee gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi laga maqlay dhawaq madaafiic ay is weydaarsanayaan ciidamadda qaranka Somaliland iyo kuwa maamul gobolleedka ee isku hor-fadhiya aagga hore ee Tuke-raq.
Wararka aanu helayno ayaa waxa ay intaa ku darayaan inay madaafiicdo socotay muddo ayna jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh, walow aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah.
Deegaanka Tuke-raq ee gobolka Sool ayaa waxa bilihii u dambeeyay ka taagnayd colaad u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland, waxaana guul-darraystay dadaalo ay beesha Caalamku ku doonaysay in xal lagaga gaadho colaada Tuke-raq.
Safar la filayay in Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ku tago gobolka Sool ayaa la sheegay in uu dib u dhacay lamana oga sababta keentay dib u dhaca ku yimid safarka Madaxweynaha oo aan gobollada dalka safar ku tagin tan iyo intii la doortay.
Wixii warar ah ee ka soo kordha xaaladda Tuke-raq halkan kala soco